Products Suppliers & Factory - Sina Products Manufacturers
Mahomby iray-mijanona manampahaizana filana ny Electronics Components
Storage Logistics International Center
Connector herinaratra, ny fitaovana ho an'ny fidirana herinaratra faritra miara-(indraindray fantatra amin'ny anarana hoe seranana, plugs, na interface). Manana karazana connectors rehetra, anisan'izany ny D-zana, fibre optic, fiara, boribory, feo sy lahatsary, RF,-pifandraisan-davitra sy ny hery ary USB. Koa izahay mitondra lehibe fantina connector ny terminal sy alalan'ny terminal kilalao miendrika biriky, ary koa ny backshells sy ny Accessories rehetra karazana.
Bitika USB Connector
Nanketo Alpes eto
XIDA Electronics miantsena lehibe fifantenana ny fahatsiarovana poti, karatra, ary fahatsiarovana manokana ho an'ny isan-Modules fampiharana, anisan'izany ny poti-ROM sy ny RAM sy DRAM poti rehetra isan-karazany, Flash karatra, FIFO, fahatsiarovana Modules sy ny maro hafa.
Sort ny fahaizana, angona fiara fitateram-bahoaka sakany, fidirana ny fotoana, miasa malefaka, fonosana, Pin fanisana sy ny maro hafa. Mitadiava entana ho fahatsiarovana isan-karazany ny interface tsara karazana ary namaky / manoratra hetsika fitakiana, anisan'izany ny mikitoantoana fahatsiarovana singa. -Boay fahatsiarovana izahay vokatra tsara ho an'ny lohamilina, computing manokana, ponenana, ara-barotra sy ny orinasa fampiharana, sy ny maro hafa.
Programmable lojika fitaovana
A programmable fitaovana lojika (PLD) dia singa elektronika ampiasaina mba hanorenana reconfigurable faritra niomerika. Tsy toy ny lojika vavahady, izay manana raikitra ny asa, ny PLD manana tsy voafaritra miasa tamin'ny fotoana fanamboarana. Talohan'ny PLD azo ampiasaina amin'ny faritra tsy maintsy ho baikoina, izany hoe, reconfigured.
4000 Series Logic Chip
74 Series Logic Chip
CPLD / FPGA Chip
Time Base Integrated Chip
Power Management Integrated faritra
Power fitantanana ny fampidirana faritra (hery fitantanana ICs na PMICs na PMU toy ny tarika) dia Integrated faritra (na rafitra andian-tsoratra ao amin'ny rafitra-on-a-Chip fitaovana) noho ny fitantanana ny fahefana ny miaramila fepetra rafitra. Toy izany no PMIC manondro isan-karazany ny poti, na izany aza ny sasany dia ahitana ny ankamaroan'ny endriky ny hery elektronika fiovam-po sy / na ny fanaraha-maso mifanaraka fiasan'ny hery. A PMIC matetika tafiditra ao anatin'ny fitaovana bateria-niasa toy ny finday sy ny haino aman-jery azo entina mpilalao mba hampihenana ny habetsaky ny toerana ilaina.
Battery Protective Chip
Linear Regulator Chip
Ara Power Management Chip
TOSIKARATRA Reference Chip
Ny Chip Analog dia napetraka ny kely elektronika Analog faritra iray niforona tamin'ny tapa-Semiconductor fitaovana.
Malefaka sy ny amin'izao fotoana izao ny amin'ny lasa mihamatanjaka ny hevitra ao amin'ny faritra ny Analog poti Miovaova foana ara-potoana. Mifanohitra amin'izany kosa, Hafanàm-po an poti ihany no ampiasaina sy mamorona voltages na discrete onja amin'ny ambaratonga, ary tsy misy soatoavina kafa. Ankoatra ny Transistors, poti-Analog Matetika no lehibe kokoa matoantenin'ny atao isan'ny singa (Inductor / Capacitors / Resistors) noho ny poti-nomerika matetika aza. Inductors Matetika tokony hohalavirina lehibe noho ny habeny, ary ny transistor sy miara-capacitor afaka manao ny asan'ny inductor. (Raha izany no fomba ampiasaina ao amin'ny CFL, azonao tsy hampihilangilana elektronika.)
Analog poti Mety misy singa lojika nomerika mba hanoloana ny sasany Analog miasa, na ny hamela ny Chip mifandray amin'ny microprocessor. Noho izany antony izany, ary satria lojika dia matetika ampiharina amin'ny fampiasana ny teknolojia CMOS, ireo mampiasa poti BiCMOS fizotry ny orinasa toy ny Freescale, Texas Instruments, STMicroelectronics sy ny hafa. Izany dia fantatra amin'ny hoe samy hafa sy mamela famantarana fanodinana mpanenona mahay mampiditra bebe kokoa ny asa ao amin'ny Chip. Ny sasany dia ahitana ny soa entana fiarovana, mihena faritra ambony mahisa sy azo itokisana.
Pure Analog poti in-baovao ny ankamaroany fanodinana no nosoloina amin'ny poti-nomerika. Analog poti mbola ilaina wideband famantarana noho ny santionany tahan'ny takiana, hery avo sy fangatahana amin'ny transducer interface. Fikarohana sy ny indostria any an-tsaha mbola mitombo dia hambinina. Misy ohatra ny ela-niaina sy malaza Analog poti no Hetsika Fanafihana Amplifier 741, ary ny 555 fameram-potoana.
Power famatsiana poti koa heverina ho Analog poti. Ny tena tanjona dia ny hamokatra tsara nifehy Output malefaka poti famatsiana hafa ao amin'ny rafitra. Koa satria mitaky rafitra elektronika rehetra herinaratra, hery famatsiana ICs singa manan-danja PMICs ireo rafitra.
A / D Fiovam-po Chip
Current Monitor Chip
D / A Fiovam-po Chip
Digital Potentiometers Chip
Ao amin'ny fitaovana elektronika sy ny herinaratra injeniera, ny nipoiran'io fitroarana dia herinaratra fitaovana fiarovana izay miasa mba hanome ny amin'izao fotoana ny fiarovana ny fizaran-tany iray herinaratra. Ny singa manan-danja dia metaly tariby na esory izay miempo rehefa be loatra amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny Mikoriana izany, amin 'izany manapaka ny amin'izao fotoana izao. Izy io dia fitaovana sorona; indray mandeha nipoiran'io fitroarana efa niasa izany misokatra ny faritra, ka tsy maintsy ho soloina na rewired, arakaraka ny karazany.
Fuses no ampiasaina ho fitaovana tena ilaina ny fiarovana avy am-piandohan 'herinaratra injeniera. Amin'izao fotoana izao dia misy an'arivony maro hafa izay manana teti-dratsy nipoiran'io fitroarana manokana amin'izao fotoana izao sy malefaka naoty, nanapaka fahaizana sy ny valin-fotoana, arakaraka ny fampiharana. Ny fotoana sy ny amin'izao fotoana izao fandidiana toetra mampiavaka ny fuses no fidina mba hanome fiarovana tsy ampy interruption Tsy ilaina. Wiring fitsipika matetika nipoiran'io fitroarana atao hoe ambony indrindra amin'izao fotoana ampy ho an'ny faritra manokana. Short faritra, overloading, mismatched entana, na fitaovana tsy fahombiazan'ny no antony voalohany nipoiran'io fitroarana fandidiana.
Ny nipoiran'io fitroarana dia mandeha ho azy ny fitaovana manala hery avy amin'ny rafitra diso; Matetika nohafohezina ny ADS (Automatic Disconnection ny Supply). Circuit onja dia azo ampiasaina ho toy ny endrika hafa vahaolana fuses, fa manana toetra samy hafa be.
Fuse Clip / Seza
Straight plug Fuse
Etỳ ambonin'ny Tendrombohitra Fuse
Audio Interface Chip
RS-485 / RS-422 Chip
Wireless mamindra-handray Chip
Fanamafisam-peo / Linear Fitaovana
Ny fanamafisam-peo dia fitaovana elektronika izay mampitombo ny herinaratra amplitude iray famantarana. Izy ireo sokajy ao amin'ny fanajana ny fahaizany pahombiazana hanamafisana na malefaka na ny amin'izao fotoana izao ny fahan'ny famantarana. Nisy fanamafisam-peo malefaka ary manamafy ilay fahan'ny malefaka famantarana sy mamokatra lehibe kokoa output malefaka. Current fanamafisam-peo, izay antsoina koa hoe transimpedance fanamafisam-peo, mahatsapa ny onja amin'ny inputs, ary Output ho malefaka ny enta-mavesatra. Transconductance sy ny fanamafisam-peo Transresistance swap vokany ity - ny fahan'ny malefaka na ankehitriny mamokatra lehibe kokoa amin'izao fotoana izao na malefaka Output tsirairay avy.
Iray manan-danja ny fampisehoana fikirana ny fanamafisam-peo dia ny linearity, na ny fahafahana hisolo tena ny torohevitra araka ny marina miaraka amin'ny famantarana mitovy endrika amin'ny andro sehatra amin'ny output. Manan-danja hafa masontsivana fampisehoana ahitana ny namono ny tahan'ny, matetika valiny, tabataba, ary ny tombom-barotra, bande passante.
Fanamafisam-peo dia sokajiana ho A, AB, B, C, D sy E. Ny kilasy dia mampiseho ny habetsaky ny fiovaovana nisy famantarana Output manana ny bisikileta iray raha toa fahan'ny dia sinusoidal waveform. Linear Arakaraka ny fanamafisam-peo dia, ny ambany dia nanova vokatra. Class A no tena Linear sy ny fotoam-pianarana C no kely indrindra Linear. Class C dia tsy mety ho an'ny teny fampiharana ary matetika no ampiasaina amin'ny vokatra toy ny RF mpampita. Kilasy D sy E dia ara fanamafisam-peo izay afaka mampiasa Output dingana faritra misy harmonic resonators, maro famatsian ara fiarandalamby, fiderana Output teknika, sy PWM ary ny vinany-sigma Fanovaovam-peo mba hampitombo ny fahombiazany sy ny hanangana indray ny fahan'ny waveform amin'ny output.
FET dreninao Amplifier
General Hetsika Fanafihana Amplifier
High Speed ​​Wide Band Hetsika Fanafihana Amplifier
Hetsika Fanafihana Instrumentation Amplifier
Low-Noise Hetsika Fanafihana Amplifier
Low-Power Hetsika Fanafihana Amplifier
Hetsika Fanafihana fametrahana mazava tsara Amplifier
Keyswitches / notantarain'ilay
Ny keyswitch dia karazana jiro kely ampiasaina fanalahidy amin'ny kitendry. Ireo no tena ankehitriny amin'ny fampiasana ankehitriny noho ny ankamaroan'ny-panendry amin'ny fampiasana taratasy ny plastika amin'ny fifandraisana azy
Key jiro ampiasaina koa mba hilazana ny jiro niasa noho ny fanalahidy izy ireo matetika ampiasaina amin'ny burglar fanairana faritra. Ny fiara ignition ihany koa ny jiro io karazana.
Notantarain'ilay dia electromechanical Switches azo actuated iray herinaratra famantarana fa tsy amin'ny alalan'ny fanokafana na fanakatonana tanana ny jiro. Faneva kely io miasa ho toy ny mpiandry vavahady ho famantarana lehibe lavitra herinaratra. Ny fahaizana manana ambany-pahefana nandritra ny fanaraha-maso ny hery avo-famantarana azy ireo no mampanan-malaza toy izany singa herinaratra.
mahay mandanjalanja Switch
Transistors dia telo-alalan'ny terminal fitaovana izay azo atao amin'ny bipolar Junction (BJT) endrika, na mihoatra mahazatra toy ny fiderana vy-azôty-Semiconductor (CMOS). Vao izao no namoronana ny nifanila n-karazana sy ny t-karazany Semiconductors in na ny PNP na NPN fanahafana. Matetika dia malefaka dia ampiharina amin'ny alalan'ny terminal ny vavahady hirotsaka mamela ankehitriny ny alalan 'ny fitaovana izay miasa koa ny transistor ho ny jiro. Izy ireo ampiasaina amin'ny rafitra nomerika mba hampiharana lojika vavahady sy ny fitehirizana antontan-kevitra. Analog faritra mampiasa azy ireo hamorona fanamafisam-peo sy ny oscillators.
Ny diode dia roa-alalan'ny terminal fitaovana izay misy na aiza na aiza, p-karazana sy n-karazany dia mivantana Semiconductors nifanolotra amin'izy samy izy. Raha mampihatra tsara ny anode malefaka dia tsy hamokatra na manan-danja amin'izao fotoana izao mandra-diode malefaka ny tokonam-baravarana dia nihoatra. Raha vao ny tokonana dia nihoatra malefaka amin'izao fotoana izao dia havela hirotsaka avy amin'ny anode ny cathode fa ny diode no hanakana ankehitriny mikoriana avy amin'ny cathode ny anode ambany ankamaroan'ny toe-javatra. Izy ireo ampiasaina amin'ny AC-DC Transformers, radio, Electro-voasakantsakan'ny marary mitsika (ESD) faritra, toy ny mazava loharanom-baovao, sns
marary mitsika Diode
High TOSIKARATRA Diode
Manana resistors ho an'ny rehetra, ao anatin'izany ny fampiharana ambonin'ny tendrombohitra iray, ho tokan-tena lavaka, trimmers, potentiometers sy rheostats, ary koa ny fitaovana isan-karazany, tambajotra sy arrays, ary ny hafa Accessories.
Ny resistor dia atao herinaratra singa fototra izay mametra na mametraka fepetra ny fikorianan'ny ny herinaratra amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny faritra. Ny amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'ny kajy ohm ny lalàna: V = IR. Fanoherana sarobidy, fandeferana, ary indraindray na dia hafanana coefficient azo tapa-kevitra amin'ny alalan'ny famakiana ny loko fehezan-dalàna, asehon'ny andianà miloko fatorana eo amin'ny lafiny ny singa.
Resistors Azo ampiasaina mba hamerana ny ankehitriny mikoriana amin'ny alalan'ny diode sy hamarana ny tsipika sy hisorohana ny fifindran'ny fisaintsainana. Azo ampiasaina roa mba mamorona malefaka mpizara izay mahatonga ny Output malefaka mitanila ny fanoherana soatoavina. Ny general-tanjona torohevitra / Output (GPIO) transceiver afaka ny Output napetraky lehibe fitaomana-up na handrava-midina resistor izay toherina rehefa GPIO lasa mavitrika.
Resistors dia nohariana mampiasa fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny karbaona ny ankapobeny, ny karbaona film, vy sarimihetsika, ary ny tariby ratra. Consumer elektronika mitaky azy ireo ho kely sy marina, fa fangatahana orinasa dia mety mitaky azy ireo ho afaka dissipating be dia be ny hery, ka izy ireo ho lehibe kokoa amin'ny farany.
Current Tsikariny Resistor
Direct plug fanilikilihana
Metal ankosotra Resistor
VY Film Resistor
Ultra-damba ambany Resistance Resistor
Fametrahana mazava tsara Adjustable Fanoherana
Thin Film fametrahana mazava Chip Resistor
Wire ratra Resistor
Buzzer / gazety / Mik
A buzzer na beeper dia feo nidika fitaovana, izay mety ho mekanika, electromechanical, na piezoelectric (piezo ho an'ny fohy). Mahazatra sy ny fampiasana ny buzzers beepers ahitana fitaovana fanairana, timers, sy ny fandraisana ho mpikambana ny mpampiasa fahan'ny toy ny totozy tsindry na keystroke.
Mpandahateny electromechanical fitaovana izay mahatonga feo. Izany dia ahitana Computer mpandahateny, Hafanàm-po an mpandahateny, Electrostatic fanamafisam-peo, Full-mpandahateny isan-karazany, Horn fanamafisam-peo, fanamafisam-peo, Magnetostatic fanamafisam-peo sy ny sisa.
Mikrô dia angovo mpanova izay niova fo feo famantarana ho famantarana elektrika.
Ny herinaratra bateria dia fitaovana ahitana ny iray na mihoatra electrochemical ivelany sela amin'ny fifandraisana amin'ny fitondrana herinaratra omena fitaovana toy ny jiro, smartphone, ary ny herinaratra fiara.
Vatoaratra avy amin'ny maro ny endriny sy ny habeny, hatramin'ny kely sela ampiasaina amin'ny fahefana mandre SIDA sy wristwatches amin'ny kely no maivam-boa sela ampiasaina amin'ny finday avo lenta, ny lehibe nitarika asidra vatoaratra ampiasaina amin'ny fiara sy kamiao, ary ny lehibe indrindra tafahoatra, be bateria banky ny haben'ny efi-trano izay manome hery vonjy taitra standby na ny an-telefaonina sy solosaina fifanakalozana angona foibe.
Battery Efajoro / Battery base
Capacitors dia atao herinaratra singa roa ny terminal izay mitahiry angovo herinaratra ny endriky ny saha elektrika. Ny terminal dia mifandray amin'ny takelaka conductive roa izany, izay misy dielectric zavatra eo amin'izy ireo. Mitahiry ny herinaratra izy ireo eo amin'ny anjara-raharahany conductive takelaka. Ny voampanga takelaka tafasaraka ny dielectric mamorona fitaovana elektrika saha.
Capacitance dia fikirana ny capacitor izay mampiseho ny habetsahan'ny herinaratra voatahiry ho nomena anjara-raharaha malefaka ampiharina amin'ny ny terminal. Izany dia refesina amin'ny farads (F). Ohatra, famerenana indroa ny capacitance herinaratra voatahiry ho avo roa heny fiampangana (ho nomena malefaka tsy tapaka amin'ny terminal).
Capacitors dia voasokajy mifototra amin'ny ara-batana fitaovana nampiasaina nandritra ny telo-mpitarika sosona dielectric mpitarika rafitra. Ohatra, ireo manana fitaovana vy dielectric electrolyte dia antsoina hoe electrolytic capacitors; metaly tanimanga vy no antsoina hoe tanimanga capacitors, sns Ireo izay tsy azo mifandray Mizarazara na ho tsara na ratsy ny malefaka. Raha toa izy ireo Mizarazara tsy maintsy mifandray amin'ny malefaka tsara, ny tsara ho voamarika amin'ny alalan'ny terminal ny fonosana.
High TOSIKARATRA Capacitor
Patch Electrolytic Capacitor
Mafy orina Electrolytic Capacitor
Ny kristaly oscillator dia elektronika oscillator faritra izay mampiasa ny milina akony ny tadin piezoelectric kristaly ny fitaovana mba hamoronana ny herinaratra famantarana amin'ny mazava tsara matetika. Izany matetika dia matetika ampiasaina mba haharaka ny fotoana, toy ny any an quartz wristwatches, mba hanome ny tranon'omby famantaranandro Integrated faneva ho nomerika ny faritra, sy hanarenana peo ho an'ny onjam-peo sy ny mpandray mpampita. Ny tena mahazatra ny haavon'ny piezoelectric karazana ampiasaina ny quartz vato krystaly, ka oscillator fampidirana azy ireo faritra lasa oscillators fantatra tahaka ny vato krystaly, fa ny hafa anisan'izany ny fitaovana piezoelectric polycrystalline seramika ampiasaina amin'ny faritra toy izany koa.
A kristaly oscillator, indrindra fa ny iray natao tamin'ny quartz vato krystaly, rehefa miasa amin'ny herinaratra diso iray tsaha, rehefa malefaka dia ampiharina amin'ny iray electrode akaiky na ny krystaly. Izany dia fantatra amin'ny hoe fananana na mitifitra ny mifanohitra electrostriction piezoelectricity. Rehefa esorina any an-tsaha, ny quartz - izay mazava tsara ao amin'ny oscillates matetika - miteraka ny saha herinaratra araka ny miverina amin'ny endrika ny teo aloha, ary mety hiteraka ny malefaka. Ny vokany dia ny quartz kristaly mitondra tena toy ny RLC fizaran-tany.
Quartz kristaly no vokarina ho an'ny peo avy any am-polony vitsivitsy kilohertz mba jatony megahertz. Ny roa arivo tapitrisa mahery no vokarina isan-taona kristaly. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia ampiasaina ho toy ny fitaovana wristwatches, famantaranandro, radio, solosaina, ary ny finday. Quartz kristaly ihany koa ny hita ao anatin'ny fitsapana sy ny fandrefesana ny fitaovana, toy ny tranombarotra, faneva gropy, sy ny oscilloscopes.
Ceramic ny haavon'ny
Varingarin'i Crystal Oscillator
Damba Active Crystal Oscillator
Damba matoantenin'ny atao Crystal Oscillator
HITAN'I ny haavon'ny
Inductors / andriamby vakana / Transformers
An inductor, antsoina ihany koa hoe ny coil, mangeja na reactor, dia atao roa-alalan'ny terminal herinaratra singa izay mitahiry angovo ao amin'ny andriamby an-tsaha, rehefa mivoaka amin'ny alalan'ny herinaratra izany. An inductor matetika dia ahitana ny Voaro tariby voa ho ao amin'ny coil manodidina ny fototry.
Andriamby vakana dia natao mba hanafoanana ny avo matetika tabataba sy Spike fitsabahan'ny amin'ny tsato-kazo famantarana andalana, andalana fahefana, ary koa mandray electrostatic pulses. Andriamby vakana dia ampiasaina mba mandray UHF famantarana, toy ny sasany RF faritra, PLL, oscillating faritra, ary ny fahatsiarovana matetika avo Ultra faritra (DDRSDRAM, RAMBUS, sns), izay tokony hanampy andriamby vakana ho fahan'ny ampahany amin'ny famatsiana ny hery. Ny andriamby Bead manana resistivity avo sy permeability, izay mitovy amin'ny mifanitsy fanoherana sy ny inductance, fa ny lanja sy ny mpanohitra inductance mitovy sanda amin'ny matetika.
Transformers ireo inductors roa fotsiny amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana mafy efa voavitrana eo amin'izy ireo. Dingana-midina Transformers hampihena ny malefaka avy fahan'ny fahefana loharano any amin'ny amplitude izay tsy mampidi-doza ary koa azo ampiharina bebe kokoa amin'ny raharaham-barotra sy ny fianakaviana. Dingana-ny Transformers hampitombo ny malefaka kokoa ny fampitana mahomby lavitra ny fahefana andalana. Transformers Tena ilaina ny fizarana ny AC hery.
Chip andriamby Bead
Common Mode mangeja
Direct andriamby Bead
DR andriamby Core
Net Port mpanova
Fitaovana sy ny Metatra
XIDA fitaovana elektronika no nanao ny manome bebe kokoa manam-petra mitondra zava-baovao samihafa maneran-tany bebe kokoa mpanjifa amin'ny vidin'ny-teknolojia vokatra mahomby. efa soa aman-tsara nandefa ny eran-tsena ny nomerika multimeter, fiara instrumentation, herinaratra fitiliana fitaovana, fiarovana ny tontolo iainana sy ny mafana fandalinana instrumentation, ny fiarovana instrumentation, ankapobeny Mpamantatra, fandrefesana sy calibration fitaovana sy nomerika fitehirizana oscilloscopes sy ny 10 isan-karazany ny lehibe sokajy ny vokatra, ary mbola hanao ny andiana vokatra voly hafa izay, ary tsy manam-paharoa tanteraka hihaona amin'ny ilain'ny mpanjifa samihafa.
Circuit mpandika Finders
Singa fototra Testing Tools
Digital Clamp Metatra
Installation herinaratra Testers
Industrial Digital Clamp Metatra
Industrial Marina RMS Multimeters
Layout sy ny fandrefesana Tools
TOSIKARATRA sy ny fitohizan'ny Testers
Sela Mpandray Hafanana
Sela Mpandray Hafanana ankapobeny latsaka ao anatin'ny anankiray amin'ireto manaraka ireto sokajy efatra:
A tsindry fanerena sensor mandrefy matetika ny mandatsa-dranomaso na ny ranon-javatra. Izy ireo miasa amin'ny alalan'ny famantarana niteraka elektronika noho ny fanerena Niteraka ho toy ny asa ny ny hery izay ilaina mba tsy ho ranoka na gazy avy amin'ny fanitarana. Sela Mpandray Hafanana ihany koa ny tsindry matetika antsoina hoe fanerena transducers, tsindry mpampita, piezometers sy ny fanerena tondro, amin'ny anarana hafa. Izy ireo dia matetika ampiasaina ao amin'ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny fampiharana.
Movimento sy ny Position Sela Mpandray Hafanana
A mihetsika sy ny toerana sensor mamela ny fandrefesana ny toerana, na amin'ny teny tanteraka (toerana tanteraka sensor), na amin'ny havany teny (havana na fifindran sensor). Sela Mpandray Hafanana Motion na toerana dia afaka mandrefy ny Linear toerana ny fitaovana (toerana Linear sensor), angular toerana miova, ary koa ny maro-mpiray miova toerana. Anisan'ny malaza indrindra ampiasaina amin'ny wearables sy handheld IoT accelerometer sy ny fitaovana dia gyroscope Sela Mpandray Hafanana.
Optical Sela Mpandray Hafanana
Optical Sela Mpandray Hafanana mamadika ny fipoak'andro maraina, na ny fiovana eo amin'ny mazava, ho any an-elektronika fanairana izay vakiana amin'ny fitaovana. Ireo Sela Mpandray Hafanana, antsoina koa hoe photoelectric Sela Mpandray Hafanana, dia avy eo afaka mamaritra ny fisiana sy ny toeran'ny fisian'ny zavatra. Optical Sela Mpandray Hafanana ampiasaina amin'ny maro samihafa ny orinasa automatique fangatahana ary koa ny vokatra ara-barotra. Anisan'ny malaza indrindra ny fibre optic Sela Mpandray Hafanana, akaiky Sela Mpandray Hafanana, sy ny fiarovana mazava efitra lamba Sela Mpandray Hafanana.
Sela Mpandray Hafanana mafana
mafana Sela Mpandray Hafanana dia fitaovana izay mamokatra ny herinaratra famantarana ho setrin'ny hafanana na ny fiovan'ny mari-pana. Izy ireo ho an'ny indostria fampiharana manontolo izay mitaky feeback ny hitana ny mari-pana tandrify fandidiana isan-karazany. Any over-hafanan'ny famakiana avy eo dia afaka miteraka ny fanakatonana ny milina mba ho ela velona ary hanana asa azo antoka tontolo iainana. Ireo karazana roa lehibe Sela Mpandray Hafanana mafana dia mari-pana sy ny hamandoana Sela Mpandray Hafanana Sela Mpandray Hafanana.
Ny hafanana sy ny hamandoana Sensor
Mpamily ireo mpampita vita fanoloran-tena. Optimisé izy ireo noho ny fiara iray manokana ny fianakaviana, na ny teknolojia sy ny fifandraisana fitsipika hanatsorana ny firafitry ny lehibe kokoa amin'ny alalan'ny fametrahana rafitra mifanaraka ny fepetra protocols sy ny herinaratra. Ohatra, ny mpamily LED offloads avo amin'izao fotoana izao ny loharano / hilatsaka fitakiana avy amin'ny CPU / AP GPIOs sy singa tao ny mpamily. Mety ahitana singa Interface mpamily sy ny mpandray (transceivers), izay singa zavatra maro izay azo ampiasaina ho fampiharana ny fifandraisana harato sy hanao ny asan'ny repeaters.
Avo Current Driver
Nandinika lalina Peripheral endasina
Fanaraha-maso MCU Chip
Port Extension Chip
Real-time Clock Chip
Ao amin'ny fitaovana elektronika, ny opto-isolator, antsoina koa hoe ny optocoupler, photocoupler, na Optical isolator, dia singa izay famindrana herinaratra famantarana eo amin'ny faritra mitokana roa amin'ny alalan'ny fampiasana light.Opto-isolators misakana voltages avo tsy mahakasika ny rafitra misy mandray ny signal.Commercially opto-isolators manohitra torohevitra-to-Output voltages hatramin'ny 10 kVand malefaka transients amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 25 kV / μs.
Ny mahazatra karazana opto-isolator ahitana ny iray no nitarika sy phototransistor ao amin 'ny manjavozavo fonosana. Hafa karazana tsikombakomba loharano-sensor ahitana LED-photodiode, LED-LASCR, ary ny fanaovan-photoresistor tsiroaroa. Matetika opto-isolators famindrana nomerika (on-eny) famantarana, fa ny sasany mamela azy ireo teknika ampiasaina amin'ny Analog famantarana.
Light Emitting Diodes mafy-panjakana mampiasa ny teknolojia mba hamokarana jiro mazava ny raharaha mafy, indrindra ny Semiconductor. Izany ampitoerany azy ho afa-tsy loharanom-baovao hafa mazava toy ny incandescent takamoa (amin'ny alalan'ny banga) na voalamina tsara fluorescent takamoa (amin'ny alalan'ny entona). Ny rafitra fototry ny mazava famokarana mihazakazaka amin'ny Band-to-Band recombination na taratra.
Nampidirina mivantana Optocoupler
LED Digital fantsona
Ny ventin-panjakana Photoelectric fampitàna
Alefaso ny Message To Us